Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka guud ee jaaliyaada S/Ogadenia ee Sweden oo shir wada tashi ah la yeshay hawl-wadeenada unugyada jaaliyadaha.
Maamulka guud ee jaaliyaada S/Ogadenia ee Sweden oo shir wada tashi ah la yeshay hawl-wadeenada unugyada jaaliyadaha.
Waxaa kulan xog waran iyo kobcin hawl shaqeed ah ku yeeshay magaalda Eskilstuna ee gobalka Södermanland qaar ka mid hawl wadeenada unugyada Jaaliyada Sweden ay ka koobantahay iyo maamulka guud ee jaliyada .
Kulankan oo ah mid lagaga wada tashaday qaab shaqeedka jaaliyada Sweden iyo sidi kor loogu qaadi lahaa hawalaha balaadhan ee jaliyada horyaala aya waxaa lagaga dooday qodobo dhawar ah oo la isla gartay inay yihiin kuwa ugu mihiimsan dhinaca halganka ay JWXO hogaaminayso. Go,aamada wax kuolka ah laga soo saray waxaa ka mid ah inay jaaliyada iyo hawl wadenada gobalduba ay ka wada shaqeeyaan kor u qaadista arimaha Dhaqaalaha, Abaabulka jaaliyada iyo hirgalinta qorshaha u dagsan jaaliyada labadan sano ee uu mamulka cusub hogaaminaayo jaaliyada.
Maamulka jaaliyada cusub markii la doortay qorshi sanadeedkii ay u dajisay jaaliayada ayaa waxaa ka mid ahaa in bil kasta maamulka jaaliyadu uu booqdo mid ka mid ah unugyada jaaliayadaha Sweden ay ka koobantahay halkaa oo la isku waraysto laguna xisaabtamo , shacabkuna la xisabtamaan jaaliyada sidoo kale jaaliyadu ay la xisaabtanto xubnaha, maantana waxaa shirkaasi uu dhacay magaladan Eskilstuna waxaana la isla soo qaaday lagagana hadalay wixii jaaliyada u qabsoomay doorashadi jaliyada oo hada mudo laba bilod ahi u dhamaatay iyo wixii u qabsoomi waayay waxa sido kale laga dooday wixii jaaliyada u qabsooomi wayay sababaha keenay waxaa sidoo kale shirka lagu go,aamiyay in xoga ugu badan la saaro bilahan fooda nagu soo haya hir galinta qorshaha jaaliyada gaar ahaan dhamaystirka unugyada jaaliayadaha ee gobalada woqooyiga dalka Sweden oo aad uga fog caasimada dalka oo ah xarunta jaaliyada guud ee Sweden , waxaa sidoo kale lagu diyaariyay qorshihii shrika Skandivianka oo 9 mars ka dhici doona magalada Göteborg iyo qaabkii loo maamuli laha shirkaas.
Ugu danbaytii shirka ayaa waxa uu ku soo dhaamaday guul iyo jawi wanaagsan iyo xubnihii oo si wayn u soo dhaweeyay qorsh sanadeedka maamulka jaaliyadu uu qaatay oo ah in bil kasta magaalo la tago xubnaha iyo maamulka guudna xisaabtamaan qolo kastana ay shaqadeeda ka soo baxdo waxaana la isla qaatay in kulanka danbe uu qof walba wixii loo diray uu shirka la yimaado asagoo dhamaystiran.